न कुम्लो, न भारी, बेच्नु छ वारी र पारी - Pradesh Today
Homeफिचरन कुम्लो, न भारी, बेच्नु छ वारी र पारी
समयको बेगसँग चलेको हावा, बतास, हुरी र आँधीबेरीमा नेपाली काँग्रेस जानेर वा नजाने, बुझेर वा नबुझेर वा रहरले या बाध्यताले आफ्ना कुम्ला र भारीलाई लत्याउँदै अर्काको कुम्लो र भारी बोक्नका लागि घोप्टिनु पु¥यो, झुक्नु प¥यो, चुक्नु प¥यो र भुक्नु प¥यो ।
यतिबेला नेपाली काँग्रेस आफ्नो कुम्लो र भारीविना नै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सामु चिनिनु, जानिनु र देखिनु पर्ने बेला भएको छ । अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धि भनौं या राजनीतिक एजेण्डा भनौं जस्तैः धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जे भनेपनि काँग्रेसका कुम्ला र भारी कदापि होइनन ।
जनताद्वारा निर्मित जनसंविधानसम्म काँग्रेसले बोके पनि र बोक्न सकेपनि अन्य कुरा काँग्रेसका लागि उचित होइनन् र छैनन् । किनभने विपीका पालादेखि उठ्दै आएको राजनीतिक एजेण्डा तथा मुद्दा भनेको प्रजातन्त्र र समाजवाद नै हो । यो भन्दा विशाल अरू केही पनि छैन र केही पनि हुन सक्दैन ?
प्रजातन्त्रलाई कसैले नौलो र आफ्नो बनाउन त्यसलाई फेरबदल र परिमार्जन गरेता पनि प्रजा र लोक बीचको फरक मात्र हो । प्रजा भनेको नै जनता हो र जनता भनेको नै लोक हो ।
हिजो नै प्रजातन्त्रले लोकतन्त्रलाई समेटी सकेको थियो । अब आयो गणतन्त्रका कुरा । गणतन्त्र भन्ने वित्तिकै प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीलाई सबैलाई सबैले सहजै स्वीकारेको भए यसमा मन्त्रीले सबैको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने राज्य प्रणाली नै जनताका लागि भ्रम र शंकाको खेती हो ।
यसलाई पनि बुझ्नेले राम्ररी बुझेकै छन् । नबुझ्नेले असली गणतन्त्र मानेकै छन् । अब आयो धर्म निरपेक्षताको कुरा भारत जस्तो विशाल मुलुक अहिले पनि हिन्दूस्तानको नामले चिरपरिचित छ र
अहिलेको भारत सरकारले पनि आफ्नो नागरिकता विधेयकमार्फत हिन्दूप्रतिको आस्था र विश्वास पूर्णरूपले झल्काईसकेको छ भने उता चीनले पनि नेपालमा जन्मेका शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धलाई मान्दै र ठान्दै आएको छ ।
नेपालमा यत्रा दुई छिमेकी मुलुकको बीचमा अवस्थित हुँदा र दुबै छिमेकी देशले आफ्नै देशको धर्मलाई अंगाल्दा नेपाल त्यसमा खुल्न नसक्नु, भुल्न नसक्नु, झुल्न नसक्नु र फुल्न नसक्नु यो आफ्नै महान कमजोरी हो ।
अब आयो जनताको समाजवादका कुरा, समाजवाद त हिजो नै विपीले अंगालीसकेको कुरा हो । त्यसमा नौलोपन ल्याउन र आफ्नो बनाउन अगाडि जनताको भन्ने थपिएको छ, त्यो पनि भ्रम हो । समाज भनेको सामाजिक प्राणीको क्षेत्र हो । सामाजिक प्राणी भनेको मानव समुदाय तथा जनसमुदाय नै हो ।
यो मानव बस्ती भित्रको नीति, नियम, विधि, कानुन र राजनीतिक प्रणाली नै समाजवाद हो । समाज भन्ने शब्दमा अघि नै जनता जोडिसकेको छ भने फेरी यसैका अगाडि जनताको भन्ने शब्दावली थप्नुको अर्थ र औचित्य के थियो ? आज नेपाली काँग्रेसले यस्ता कुनै पनि विषय र एजेण्डामाथि केन्द्रित भएर जनतासँग प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन ।
जसका कारण वर्तमान अवस्थामा नेपाली काँग्रेस न घर सपारेको न पर सपारेकोमा पर्न बाध्य भएको छ । यतिबेला नेपाली काँग्रेसको घर नै बिग्रिएको अवस्थामा छ । किनभने उसले आफ्ना नीति, नियम, विधि, मूल्य, मान्यता तथा आदर्शहरूलाई नै क्रमश लत्याउँदै आइरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसमा यतिबेला नैतिकताको घडेरी छैन र नैतिकताको खडेरी मात्र छ । यसले देश र जनताको हित पक्षमा लाग्न र उभिन देशको बहुमतको सरकारलाई औंला ठडाएर बारम्बार खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
काँग्रेसले कहिल्यै पनि देश र जनतालाई सच्चा कुरा भन्न र देखाउन सकेन । अहिलेका जति पनि परिवर्तन छन् ती सबै हिजोकै मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन् भनेर भन्न सकेन । न त काँग्रेसले आफ्ना कुम्ला र भारी बोक्न सक्यो न त काँग्रेसले अरूको कुम्ला र भारीभित्रका चिजविज बारेमा भन्न र कुरा खोल्न नै सक्यो ।
अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको समाजवाद स्थापित गर्ने कुरालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर अघि बढिरहेको बेला नेपाली काँग्रेस मौन छ ।
यसले भन्न सकिरहेको छैन कि नेपालमा समाजवादको सिद्धान्त त हिजो नै विपीले प्रतिपादन गरेका कुरा हुन् । यो के नौलो भयो र ? आखिर (बोतलमा पानी) भन्नु र (सिसीमा जल) भन्नुमा के फरक छ र ? दुबै उस्तै–उस्तै त हो । त्यसरी पनि राजनीतिमा फरकपन देखिन र देखाउन सकिदो रहेछ । त्यसैले त राजनीतिमा भनिएको होला ।
राजनीतिक भाषामा नै पुष्टि हुन्छ रे ! कालो कौवाले सेतो बच्चा निकाल्न फूल पार्न सक्छ र ? सेतो बकुल्लाले पनि कालो बकुल्ला निकाल्न, फूल पार्न सक्छ भनेर । तर यो कुरालाई काँग्रेस जस्तो शक्तिशाली पार्टीले जनतासामू स्पष्ट पार्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
काँग्रेसका लागि सत्ता, सरकार, पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, बहुमतत तथा दुईतिहाई बहुमतसमेत कुनै पनि कुरा नौलो र अचम्म नभएता पनि जनतासामू उभिन, देखिन, प्रष्ट हुन र प्रष्ट पार्न किन चुकेको हो ?
यो विषय निकै गम्भीर विषय हो । ऊ आफ्ना योगदानका कुरा पनि गर्न चुकिरहेको छ र ऊ अरूले ल्याएको र बनाएको नयाँ कार्यदिशा तथा नयाँ एजेण्डालाई पनि खण्डन मण्डन गर्न चुकिरहेको छ ।
कुनै पनि पार्टी वा दल सशक्त, जुझारू र शक्तिशाली त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला जनताको पूर्ण सहमत रहन्छ । जनताको समाजवाद जान्ने, मान्ने र बुझ्नेले जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षालाई बुझ्न सकिएन भने त्यसले पूर्णता र सार्थकता पाउदैन । देशको सरकार भनेपनि, देशको प्रतिपक्ष भनेपनि जसले पनि काम गर्ने भनेको देश र जनताको हितमा हो । जनहितमा आधारित र आश्रित भएर जो पार्टी लाग्न र जाग्न सक्छ त्यही नै भविष्यको वैकल्पिक शक्ति हो ।
काँग्रेसको घर वरपर सबै यतिबेला ओझेलमा परिरहेका छन् । पछिल्लो समयको उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले केही उपलब्धि हासिल गरेता पनि उसको निरिहपनले उसलाई नै छोपिराखेको छ र तोपि राखेको छ ।
काँग्रेसका लागि पहिलो कुरो त आफ्नो कुम्लो र भारी नै ठूलो थियो । त्यो कुम्लो तथा भारी न त बोकिरहन सक्यो न कसैलार्य बोकाइरहन सक्यो । न त आफूले बोकेको कुम्लो र भारी चिन्न र चिनाउन नै सक्यो । यो अवस्थाको काँग्रेस भविष्यमा फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कला भन्ने सहजै अनुमान गर्ने कसरी ?
किनभने एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीसँग जुध्ने नेपाली काँग्रेस आफैमा वर्गीकृत हुन थाल्यो भने त्यसबाट आशा राख्ने के ? पार्टीमा कहिल्यै पनि व्यक्ति महत्व नहुने कुरा नेपाली काँग्रेसलाई थाहा छैन र ?
यतिबेला व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा लागेर काँग्रेस अन्धो बन्दैछ । पार्टी नै रहेन भने व्यक्तिको अर्थ के भयो पार्टीका लागि व्यक्ति अघि सर्ने कि व्यक्तिका लागि पार्टी अघि सार्ने ? यो कुरा नेपाली काँग्रेसले बुझ्छ कहिले ?
सरकारसँग लड्ने र जुध्ने हैसियत राख्ने काँग्रेस आज घर नै सपार्न सकेन भने भोलि देश सपार्छ कसरी भोलि जनता सपार्छ कसरी ? आज सकार जनहितमा लागेन,
सकारले प्रतिक्षपपले टेरेन, सरकारले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन ग¥यो, सरकारले नेपाली काँग्रेसलाई पेलेर जान खोज्यो, सरकारले निरकुंशता लाद्न खोज्यो र सरकारले देश र जनताको अपेक्षामा कुठाराघात ग¥यो भनिरहेका बेला नेपाली काँग्रेस आफै किन यसरी पछि पर्दैन ।
नेपाली काँग्रेस अनेकतामा एकता कि एकतामा अनेकता ? नेपाली काँग्रेसमा गुट, उपगुटको अन्त्य कि त्यसको शुरूवात ? किन सुध्रन सकेन ? यतिबेला नेपाली काँग्रेसका लागि आफ्नो भन्ने के छ ?
बताउन सक्छ ? यदि उसले यो कुरा बताउन सकेको भए त प्रतिपक्षमा बस्नु नै पर्ने थिएन नि ? आफ्नो भन्ने केही नभएका बेला आफ्नो बनाउने कसरी र अर्काको पुष्टि गर्ने कसरी ? त्यो योजना काँग्रेससँग छ ? नेपाली काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रको बारेमा खेलर बहस गर्न किन चाहन्न ?
नेपाली काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा धर्म निरपेक्षताको बारेमा खुलेर छलफल गर्न किन चाहन्न ? नेपाली काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा संघीयताका बारेमा खलेर विचार राख्न किन चाहन्न ? नेपाली काँग्रेस वर्तमान अवस्थामा जनताको समाजवादका बारेमा खुलेर पुष्टि गर्न किन चाहन्न ?
सरकारका पाइला–पाइला र कदम–कदममा निगारी पु¥याएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बेलामा घर झगडा र घरधन्दामा अल्झेर र बल्झेर सरकारले के गर्दैछ ?
भन्ने गन्धसमेत थाहा नपाउने अवस्थामा नेपाली काँग्रेस पुगिसकेको छ । यो गतिविधि र चालाले प्रत्यक्ष हानी कसलाई होला र प्रत्यक्ष फाइदा कसलाई होला ? त्यसको लेखाजोखा बेलैमा गर्ने कि नगर्ने ?
अरू कमजोर भएको बेलामा आफू झन सशक्त भएर उभिनु पर्ने बेलामा अरू सशक्त बनिरहेको बेलामा आफू कमजोर बन्ने बाटो रोज्दै छ र खोज्दैछ भने यो नेपाली काँग्रेसका लागि ठूलै चुनौती हो ।
भविष्यमा आफू टिक्ने र बिकने योजना बनाउने बेलामा घर भाँड्ने र घर फुटाउने योजनामा काँग्रेस लाग्नु र जाग्नु खासै राम्रो संकेत होइन । देश र जनताका लागि सरकार सँगसँगै प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै बलियो, सशक्त र शक्तिशाली बन्न जरूरी छ । एकपक्षीय ढंगले सक्रियता र सशक्तता बढ्दै गयो भने त्यसले अपेक्षाकृत फल दिन सक्दैन ।
देशको अवस्था अनुसार र समयको गति अनुसार यतिबेलाको नेपाली काँग्रेस न कुम्लो न भारी बेच्नु छ वारी र पारीको अवस्थामा छ ।
किनभने यतिबेलाका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई न त काँग्रेसले आफ्नो बनाउन सकिरहेको छ, न त अर्काको पुष्टि गर्न नै सकिरहेको छ । यति मात्र होइन हिजोकै पुराना एजेण्डाहरूलाई थप लिपपोत र रङरोगन गरेर नयाँ बनाउँदा समेत पनि त्यसको पृष्टि नेपाली काँग्रेसले गर्न सकिरहेको छैन ।
यदि कोही कसैले वास्तविकता र यथार्थता पुष्टि नगरे पनि भोलिको समयले आपसेआप पुष्टि गर्नेछ र त्यतिबेला मात्र नेपाली काँग्रेसलाई पछुतो हुनेछ ।
आज जुन कुरा नेपाली काँग्रेसले भन्न सकिरहेको छैन त्यो कुरा भविष्यको समयले नै बताउने छ र भन्ने छ । आफू देखेको, जानेको, सुनेको र भोगेको यथार्थ देश र जनतामाझ देखाउन सक्नु नै राजनीतिक महानता हो ।
देश र जनताका निम्ति कुनै कुरा सशंकित र भ्रमित छन् भने ती कुरालाई बेलैमा देखाउनु बुद्धिमानी र राजनीतिक चलाखी पनि हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका लागि यो अवसर हो, यो मौका हो र यो सहज वातावरण पनि हो । यतिबेला आफ्ना कुम्ला, भारी र एजेण्डालाई आफ्नो र पराई घोषणा गर्न सकेन भने ठूलो भूल हुनेछ ।
अधिकांश कुरो त नयाँ भन्ने नै केही छैन । जननिर्मित नौलो संविधानबाहेक अर्को अचम्म मान्नु र ठान्नु पर्ने नै केही छैन । किनभने सबै उपलब्धिहरू अभ्यासको क्रममा छन् । कसरतको क्रममा र परिक्षणको क्रममा छन् ।
देश र जनताले चाहेको भन्दा पर केही पनि पास हुन सक्दैन र खास हुन सक्दैन । सबै कुरा अभ्यास, कसरत र परिक्षणको क्रममा रहना जनता के चाहन्छन् ? भन्ने कुरा भविष्यले नै निर्धारत गर्ला । जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन र हुँदैन पनि ? जनमतको पूर्ण करद गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप चल्नु सबैका लागि आजको आवश्यकता हो ।
कुनै पनि पार्टी वा दल सशक्त, जुझारू र शक्तिशाली त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला जनताको पूर्ण सहमत रहन्छ । जनताको समाजवाद जान्ने, मान्ने र बुझ्नेले जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षालाई बुझ्न सकिएन भने त्यसले पूर्णता र सार्थकता पाउदैन ।
देशको सरकार भनेपनि, देशको प्रतिपक्ष भनेपनि जसले पनि काम गर्ने भनेको देश र जनताको हितमा हो । जनहितमा आधारित र आश्रित भएर जो पार्टी लाग्न र जाग्न सक्छ त्यही नै भविष्यको वैकल्पिक शक्ति हो । नेपाली काँग्रेस आफ्नै घर सुधार्न जरूरी छ ।
आफ्नो घर सुधार्न जरूरी छ । आफ्नो घर सुधारीसकेपछि आफ्नै कुम्लो र भारी बोक्न जरूरी छ । आफ्नै कुम्लो र भारीको ठेगान लगाईसकेपछि त्यसैलाई आधार मानेर देशभित्र र देश बाहिर चिनिन र चिनाउन जरूरी छ ।
यतिबेलाको अवस्था भनेको ढुलमुले अवस्था हो । समयको माग र गतिलाई मौन समर्थन गर्दैन भारी विनाको बटुवा भएर हिडेको अवस्था हो । यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस गुज्रिरहनु हुन्न ।
साँचो कुरा भन्न सक्नुपर्छ र भन्न सकेको कुरा साँचो हुनुपर्दछ । यही सिद्धान्तमा अडिक भएर नेपाली काँग्रेस अघि बढ्न सकेन भने भोलिका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न फलामको चिउराा सावित हुनेछ । घमण्ड र दम्भले मात्र हुँदैन र इतिहास र लोगोले मात्र हुँदैन ? सिंगो पार्टीको आदर्श र सिद्धान्त लोकप्रिय हुन जरूरी छ ।